By Fatiya Adam • May 12, 2020
Magaala Woodbury county keessatti guyyaa Kibxata sababa coronavirus nama 4 du’e jira.
Manni fayyaa Sioux land du’aafi nama haarawa 314 coronavirus qabamu gabaase. Magaala Sioux city naanno metro tti namani hagga ammaa du’e nama 20 gahee jira. Magaala Dakota county namni haarawa tokko dabalame jira waliigalattii nama 3,400 ol Woodbury fi Dakota county keessatti gahee jira.
Akka Kutaan Iowa gabaaseti guyya har’a sababa coronavirus dhaan duuti baay’e gudaachuu isaa himan
By Fatiya Adam • Apr 24, 2020
Akka Kutaan Iowa gabaaseti guyya har’a sababa coronavirus dhaan duuti baay’e gudaachuu isaa himan. Kanaafu Governor Kim Reynolds ajaja haara akka baasuu heddu himte.
Akka jetetti Wiyxata irra jalqabe ummata serjeriif filattame fi suqidhaan qoteebultotaa akka dalaagan hayamte. Akkasumas guyyaa saan yoom akka state nii dalagatii akka debi’uu himti.
Magaala Sioux City kessaatti namni coronavirus qabame guyyaa kamsa akka baay’e oldabale himame
By Fatiya Adam • Apr 23, 2020
Magaala Sioux City kessaatti namni coronavirus qabame guyyaa kamsa akka baay’e oldabale himame.
Magaala Dakota County keessattile bay’ee oldabaluun isaa himan. Namni haarawni coronavirus qabame 133 yoo ta’u waligalati nama 246 gahe jira.
Kunis guyya tokko keessatti harka lama dabaluu mul’isa.
Magaala Woodbury county yeroo tokkotti namni coronavirus qabamu guddataa deema jira. Namni haarawni 46 coronavirus qabame waliigalati nama 158 gahe jira. Kaa fayye amoo 28.
Kaampan Tyson kan booyye Waterloo yeroodhaaf dhaabate jira
By Fatiya Adam • Apr 22, 2020
Manni fayya Iowa akka gabaaseti namni haarawa Coronavirus qabame 107 yoo ta’u, kunis nama 19 magaala woodbury county dabalateeti. Irra guddan namni dhukuba Kanaan qabame nama umrii 18 – 60 jidduu jiraniidha. Akkasumas namni 7 dabala du’uun himame, waliigalati namni du’e nama 90 gahaniiru.
Guyya Kibxata, itti gaafataman fayya akka jedhe, magaala Woodbury county keessatti namni 1 yerroo jalqabatif coronavirus du’uu himame.
Magaala Woodbury County keessatti yeroo jalqabaatif nami 1 sababa coronavirus du’uu himame
By Fatiya Adam • Apr 21, 2020
Magaala Woodbury County keessatti yeroo jalqabaatif nami 1 sababa coronavirus du’uu himame.
Namni du’ee kuni nama umrii isaa 61 – 80 yoo ta’u innis hospitaala osoo hin sennin manatti du’uun isaa himame.
Guyyaa har’aa conference tti ogeeyan fayyaa noonno akaa jedhanatti, dhukubni kuun akka hin babal’aanef waan dandenu irratti hojatuu qabna. Akkasuman ummani akka mana taa’uu qaban keessaattu waytaa qilleensi oo’a tti jijjirama demuu kanaa.
Iowa Governor Kim Reynolds akka guyyaa har’a jetteti manni barmoota kaa waggaa kana guutu akka cufam
By Fatiya Adam • Apr 17, 2020
Iowa governor Kim Reynolds akka guyyaa har’a jetteti manni barmoota kaa waggaa kana guutu akka cufamu himte jirti.
Murtii kana murteesuu baay’ee ulfaata ture jettee, hergaa umanii bay’een dhukuba kanaan hinqabamin.
Ammas Kim akka jetteti name 4 dabalataan dhukuba coronavirus irraa kan du’an, walii galati Iowa keessati namni du’e 64 gahuu himte.
Kutaa Iowa keessatti namni haarawa coronavirus qabame nama 191 yoo ta’u waliigalatti nama 2,332 gahee jira. Kunis magaala Woodbury County kessa nama 4 dabalatteti.